कट आउट - शैली जुन यस गर्मीमा बलियो हुँदैछ | बेजिया
सुसाना Godoy | 13/05/2022 10:00 | मैले के लगाउने?
हामीले रोयल्टीमा पनि देखेका छौं र यो कट-आउट कट फेरि उपस्थित छ यस नयाँ सिजनमा पहिल्यै रिजर्भ। पहिरन वा जम्पसूट जस्ता कपडाहरू उहाँलाई पहिले कहिल्यै नभएको रूपमा आत्मसमर्पण गर्छन्। मौलिकता र रंगको ब्रशस्ट्रोक जुन वसन्तको हरेक दिन र अवश्य पनि, लामो-प्रतीक्षित गर्मीमा उपस्थित हुनेछ।
यो एक उत्तम र मौलिक विचार हो, जसले शरीरको भागलाई हाइलाइट गर्नेछ र हामी यसलाई सादा रङहरू, प्रिन्टहरू वा सबैभन्दा सामान्य कपडाहरूसँग मिलाएर पूरा गर्नेछौं। त्यसोभए, यदि तपाइँ यी सबैको राम्रो संग्रह हेर्न चाहनुहुन्छ भने, हामीलाई प्रस्तुत गरिएको जस्तो केहि छैन Stradivari, किनकि उसले हामीलाई देखाउने हरेक विकल्पलाई सधैं हिट गर्छ। यो नछुटाउ!
1 औंठीको साथ पोशाक काट्नुहोस्
2 पछाडि फराकिलो नेकलाइनको साथ छापिएको पोशाक
3 छोटो गुलाबी पार्टी पोशाक
4 हल्टर गर्दन जम्पसूट
5 फिट कालो पोशाक
औंठीको साथ पोशाक काट्नुहोस्
Es रानी लेटिजियाले लगाएको जस्तै एक विचार। यद्यपि यो एक कट हो जुन प्रचलनमा छ, यो पनि उल्लेख गर्नुपर्छ कि यसले मौलिकता र उत्कृष्ट शैली थप्छ जहाँ तपाइँ पाइला पाइन्छ। तसर्थ, रोयल्टीले पनि यस्तो मौलिक विचारको साथ हिम्मत गर्छ। यस अवस्थामा, Stradivarius सँग अर्को समान संस्करण छ तर छोटो आस्तीनमा र जहाँ सेतो हावी हुन्छ। हामीले ट्यान्ड गरिएको छाला देखाउन सुरु गर्दाको लागि आधारभूत र धेरै चापलूसी रंग। इभासे स्कर्ट र राउन्ड नेकलाइनको साथ आरामदायक चोलीको साथ, दुबैको मिलन कट र अगाडिको औंठी मार्फत उठाइएको छ जसले भेलाहरूको श्रृंखला प्रकट गर्दछ। मनपर्छ?
पछाडि फराकिलो नेकलाइनको साथ छापिएको पोशाक
यस प्रकारको कट आउट कटमा धेरै संस्करणहरू छन्। किनकी कहिलेकाहीँ केवल सानो छेउको क्षेत्र देखिन्छ र अरूमा, यो पछाडि फराकिलो नेकलाइनको साथ पूरा हुन्छ, जस्तै मामला हो। यो हल्टर नेकलाइनको साथ पूरा भयो तर यसले खाली पछाडि लैजान्छ। निस्सन्देह, पोशाक आफैंमा धेरै सहज छ, लोचदार ब्यान्डहरूको लागि धन्यवाद। यो नरम कपडामा र फ्लोरल प्रिन्टहरूसँग पनि प्रस्तुत गरिएको छ जुन शेडहरूको संयोजनको लागि धन्यवाद चिन्ह लगाइएको छ। यो ती विचारहरू मध्ये अर्को हो जुन तपाईं यस सिजनको प्रतिरोध गर्न सक्षम हुनुहुने छैन।
छोटो गुलाबी पार्टी पोशाक
यो जस्तै गर्मी संग्रहमा पार्टी शैली हराइरहेको छैन। किनभने साटन फिनिश यस छोटो पोशाकमा गुलाबी रंगको छायामा देखिनेछ जसले तपाईंलाई प्रेममा पर्न सक्छ। निस्सन्देह, यो सबै होइन तर यो एक छ स्फटिक क्रिस क्रस जसले सूटलाई थप उज्यालो दिनेछ। देखेर मात्रै पार्टी गर्ने इच्छा देखा पर्न थाल्छ । अब तपाईले गर्नुपर्ने भनेको केहि चाँदीका सामानहरु संग तपाईको लुक पूरा गर्नु हो र तपाई उत्कृष्ट रातको मजा लिन तयार हुनुहुनेछ।
हल्टर गर्दन जम्पसूट
कट आफैंको अतिरिक्त, जुन आज नायक हो, हामी नेकलाइनहरू बिर्सन सकेनौं। यस्तो देखिन्छ कि हल्टर फिनिश यस्तो प्रवृत्तिको मुख्य नायक हो। किनकि हामी यसलाई धेरै फेला पार्न सक्छौं लुगाहरूमा बाँदरहरूमा जस्तै। अब पछिल्ला पात्रहरू हुन्, किनभने तिनीहरू दुवै आधारभूत रंग र जीवन्त शेडहरूमा पनि देख्न सकिन्छ। चौडा खुट्टा फिनिशको साथ, तिनीहरू दिन र रातको विभिन्न समयमा लगाउनको लागि उपयुक्त हुनेछन्।
फिट कालो पोशाक
कालो पोशाक कहिल्यै असफल हुँदैन र यस कारणको लागि, Stradivarius को पनि आफ्नै छ जुन हामीले मन पराउँछौं। किनभने यसमा फिट फिनिश छ, जसले तपाइँको सिल्हूटमा फिट हुनेछ र यसलाई पहिले कहिल्यै नभएको जस्तो परिभाषित गर्दछ। कम्मरको दुबै छेउमा ती कटहरू बाहेक जुन हामीले धेरै देखिरहेका छौं र फेरि एक पटक सूक्ष्म रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। तपाईले थप्नुहुने सामानहरूमा निर्भर गर्दै, विभिन्न शैलीहरूसँग लुगा लगाउन यो उत्तम विचार हो। हामी यसलाई तपाइँको छनौटमा छोड्छौं!
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » फेसन » मैले के लगाउने? » कट-आउट कट यस गर्मीमा पुनरागमन गर्दैछ